Warbixin: Israa’iil waxay ku guul-darraysatay inay baarto dilka Falastiiniyiinta loogu geystay dibadbaxyada Qaza - Diblomaasi
Related Topics:Warbixin: Israa’iil waxay ku guul-darraysatay inay baarto dilka Falastiiniyiinta loogu geystay dibadbaxyada Qaza
Duqeymaha Isbaheysiga Sacuudiga uu hogaamiyo ayaa sababay in isbitaalada dalka Yemen ay buux dhaafiyaan dad ku dhintay iyo kuwa dhaawacmay.
Dad aad u tiro badan ayaa lagu dilay, waxaana suurtagal ah in boqolaal kale ay ku dhaawacmeen duqeymaha dhanka cirka ah ee ka socda dalka Yemen, waana xiisadii ugu dambeysay ee dagaalka xulafada Sacuudi Carabiya ay kula jirto fallaagada Xuutiyiinta ee dalka burbursan.
Bartilmaameedyada Jimcihii la soo dhaafay ayaa lagu soo waramayaa in ay ka mid yihiin xabsi iyo garoon diyaaradeed oo ku yaalla waqooyiga magaalada Sa’ada, xarumo kala duwan oo dowladeed iyo dhismo isgaarsiin oo ku yaalla Xudeydah. Qaar badan oo ka mid ah dhibanayaasha ayaa loola cararay Isbitaalka Al-Gumhourriyeh ee Sacda, kaasoo la dhigay 138 dhaawac ah iyo 70 meyd ah, sida ay sheegtay kooxda gargaarka ee Dhakhaatiirta Aan Xuduudda Lahayn (MSF).
Isbitaalka Al-jumhuurriya aad buu u camiran yahay oo ma aqbali karto bukaan kale, waxaana ugu yaraan laba isbitaal oo kale oo magaalada ah la gaarsiiyay dhaawacyo badan, ayay tiri MSF. Weli waxaa jira meydad badan oo yaal goobta shaqo joojinta ugu xun ay ka dhacday, xabsiga Sacda.
“Suuragal maaha in la ogaado inta qof ee la dilay,” ayuu yiri Axmed Mahat, madaxa howlgalka MSF ee Yemen. “Waxay u muuqataa inay ahayd fal rabshado ah oo naxdin leh.”
Laanqeyrta cas ayaa sheegtay in ay sahay dawo ah u dirtay labo ka mid ah isbitaalada oo ay buux dhaafiyeen dhaawacyo. Duqeynta ka dhacday Xudeydah ayaa meesha ka saartay adeegga internetka ee dalka oo dhan waxaana la sheegay in ay ku dhinteen ugu yaraan saddex carruur ah. Maqnaanshaha khadka internetka ayaa lagu soo waramayaa in uu caqabad ku noqday dadaalladii lagu gaarsiin lahaa gargaarka iyo uruurinta xogta duqeynta.
Isbaheysiga Sacuudiga uu hoggaamiyo ayaa sheegay in ay duqeeyeen dekedda Xudeydah iyo “bartilmaameedyo militari” oo ku yaalla magaalada Sanca ee caasimadda Yemen. Sida ay sheegtay wakaaladda wararka Sacuudiga ee ay dowladdu leedahay, duqeymaha ayaa la fuliyay “iyagoo ka jawaabaya halista weeraro cadowtinimo ee Xuutiyiinta kaga imanaya”.
Isbaheysiga ayaa xoojiyey duqeymaha cirka ee Yemen horaantii isbuucaan iyaga oo ka jawaabaya weerarrada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Xuutiyiinta ee Imaaraatka Carabta, oo xulafada Sacuudiga uu ka yahay dagaalka.
Afhayeenka Xuuthiyiinta Yahya Sare’e ayaa ku andacooday in weeraradii Dubai iyo Abu Dhabi ay ahaayeen kuwa aargoosi u ah duullaanka sii kordhaya ee xulafada Yemen. Kadib duqeymihii cirka ee bahalnimada ahaa ee Jimcihii, Saree waxa uu muujiyay wareeg kale oo aargoosi ah, isagoo leh “waxaan kula talineynaa shirkadaha ajnabiga ah ee ku sugan Emirate-ka inay isaga baxaan sababtoo ah waxay maalgashadaan waddan aan ammaan ahayn, taliyayaasha dalkanina waxay sii wadaan gardarrada ka dhanka ah Yemen.”
Wadamada Khaliijka ayaa isbedel weyn ku sameeyay siyaasadooda arrimaha dibadda sanadka 2021-ka. Dhacdadii juqraafiyeed ee ugu muhiimsan gobolka ayaa ahayd ka bixitaankii ciidamada Maraykanka ee Afgaanistaan, taas oo dhalisay walaac baahsan oo gobolka oo dhan ah. Guusha Daalibaan ee laxaadka leh waxay si toos ah u dhiirogelinaysaa, soona celin doontaa isqorista iyo hamiga kooxaha isku fikirka ah sida ISIS iyo al-Qaacida.
Dhacdadii juqraafiyeed ee ugu muhiimsan gobolka ayaa ahayd ka bixitaankii ciidamada Maraykanka ee Afgaanistaan, taas oo dhalisay walaac baahsan oo gobolka oo dhan ah. Guusha Daalibaan ee laxaadka leh waxay si toos ah u dhiirogelinaysaa, soona celin doontaa isqorista iyo hamiga kooxaha isku fikirka ah sida ISIS iyo al-Qaacida.
Marka hore, ka dib markii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu xukunka qabtay, “isbaheysiga caalamiga ah,” oo lagu aasaasay magaca madaxweynihii isaga ka horreeyay ee Donald Trump, ayaa burburay.
Wadamada Khaliijka ee kala ah Imaaraadka Carabta (UAE), Sacuudiga iyo Baxreyn, ayaa bilaabay inay dib u habeyn ku sameeyaan siyaasadahooda arrimaha dibadda. Waxay soo celiyeen xiriirkooda Qadar intii uu socday shirkii Golaha Iskaashiga Khaliijka ee ka dhacay Sacuudiga, waxayna dib u soo celiyeen xiriirkii diblomaasiyadeed ee dowladda Qadar. Intaa waxaa dheer, qaar ka mid ah wadamada Khaliijka waxay xoojiyeen caadi ahaanshahooda Israa’iil iyagoo u maray booqashooyin heer sare ah oo dhowr ah.
Midda labaad, Mareykanka wuxuu go’aansaday inuu ka baxo Afgaanistaan, wuxuuna dalka uga tagay Taliban.
Tani waxay dhaawacday kalsoonidii Maraykanka ee Bariga Dhexe, taas oo keentay in wadamada Khaliijka ay ka walaacaan in Washington ay sidoo kale dhaafto xiriirkii ay la lahayd. Taasi waxay keentay in wadamada khaliijku helaan saaxiibo kale oo ay ku kala duwanaadaan xiriirkooda arrimaha dibadda. Wadamada Khaliijka ayaa bilaabay in ay door bidaan wanaajinta xiriirka ay la leeyihiin wadamada gobolka, kaas oo ay leeyihiin xiriir toos ah. Sidaa darteed, waxay doonayeen inay la shaqeeyaan jilayaasha gobolka halkii ay ka ahaan lahaayeen quwadaha caalamiga ah.
Saddex, xubnaha “isbahaysiga caalamiga ah” ee uu dhiirigeliyay Trump waxay xaqiiqsadeen in faragelintooda iyo siyaasadahooda indho-indhayntu aysan ahayn kuwo waara.
Waxay ku guuldaraysteen inay wax ka qabtaan xasaradaha gobolka sida Qadar, Yemen, Liibiya iyo Suudaan waxayna go’aansadeen inay ka baxaan dhibaatooyinkaas. Waxa ay ka tanaasuleen siyaasadii adkeyd ee ay kula dhaqmi jireen jilayaasha kale ee gobolka waxayna go’aansadeen in ay xiisadda gobolka sii dejiyaan.
Tan afraad, wadamada Khaliijka ee taageera mawqifkooda ayaa caburiyey dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed iyo jilayaal badan oo ka jira dunida Carabta sida Ikhwaanul Muslimiinka iyo ururada xiriirka la leh, waxaanay xaqiijiyeen maamulkooda ugu yaraan xilliga dhexe. Si kale haddii loo dhigo, dhammaadka 2021, waxay la kulmaan hanjabaado yar oo ka imanaya jilayaasha mucaaradka. Hadda ka dib uma tixgalinayaan jilayaashan mid ka mid ah meelaha ugu waaweyn ee xiisadda gobolka. Xaaladdan ayaa sidoo kale ka mid ah sababaha caadiga ah.
Khaliijka iyo isbedeladooda aragtida siyaasadeed
In kasta oo ay jiraan dadaallo dib-u-heshiisiineed oo dhameystiran oo laga sameeyay dalalka Khaliijka sanadka 2021-ka, waxaa sii socday kala qeybsanaanta Khaliijka dhexdiisa. Halka Imaraatka, Sacuudi Carabiya iyo Baxrayn ay xoojiyaan nidaamkooda siyaasadeed ee “adag”, Cumaan, Kuwayt iyo gaar ahaan Qadar waxay xoojiyaan nidaamkooda siyaasadeed ee “jilicsan”. Imaaraatka, Sacuudiga iyo Baxrayn waxa ay la kulmeen jabin lagu sameeyay hannaankooda siyaasadeed ee soo jireenka ahaa.
Imaraatka, Sacuudi Carabiya iyo Baxrayn waxay bilaabeen dadaallo ay ku xoojinayaan nidaamkooda siyaasadeed ee “casriga ah” iyo “cilmaaniga”.
Haddaba, Boqortooyooyinkaasi waxay isu ekaysiiyeen Jamhuuriyadihii soo jireenka ahaa ee Gu’ga Carabta ka hor, iyagoo meesha ka saaraya hab-dhaqanka casriga ah ee qarniga 20-aad ka jiray dalalka Carabta. Boqortooyada Sacuudi Carabiya waa dowlad caadi ah oo la kulmaysa isbeddelkan. Tusaale ahaan, Dhaxal-sugaha Boqortooyada Maxammed bin Salman (MBS) waxa uu udub dhexaad u ahaa dhammaan awoodaha siyaasadeed iyo dhaqaale ee gacantiisa ku jira. Waxa uu dhinac ka saaray labada qoys ee Al Sacuud iyo Al Sheekh, oo ah labada qoys ee soo jireenka ah ee xukunka Sacuudiga soo maray.
Isbadalladaas oo fal-celis ka qaatay, waxaa kordhay kala qaybsanaan siyaasadeed iyo mid bulsho oo ka dhex jirta dalalka Khaliijka. Maamulada Khaliijka ayaa bilaabay inay ka werweraan mustaqbalka badbaadadooda. Dhallinyarada shaqo la’aanta haysata, gaar ahaan kuwa ku nool baraha bulshada, isla markaana la socda isbeddellada siyaasadeed ee dalalka kale ee dunida, ayaa noqday mid ka mid ah isbeddellada ugu daran ee Khaliijka.
Intaa waxa dheer, qurba-joogta khaliijka wax ku ool ah oo ka tirsan qaybaha kala duwan ee bulsho iyo fikradeed ee bulshooyinkooda ayaa soo ifbaxay xilligii gu’ga Carabta ka dib. Qurba-joogtaasi ayaa intooda badan waxa ay magan-gelyo ka dhigteen dalalka reer galbeedka, waxaanay samaysteen shabakado saamayn ku yeesha siyaasadda dalalkooda.
Dhanka kale, Qadar, Kuwayt iyo Cumaan waxay diideen inay raacaan wadadii “isbahaysiga caalamiga ah.” Si kastaba ha ahaatee, saddexdan waddan waxay ku dhaqmayeen siyaasado kala duwan. Halka Qadar ay sii wadday in ay sii waddo siyaasaddeeda arrimaha dibadda ee madaxa-bannaan, Kuwayt iyo Cumaan waxay sii wadeen tallaabooyin taxaddar iyo dhexdhexaadnimo ah. Dhanka kale, waxaa sii kordhaya khilaafka u dhaxeeya Imaaraadka iyo Sacuudiga. Tusaale ahaan, labadan waddan waxay raacaan siyaasado kala duwan oo iska soo horjeeda oo ku wajahan dhibaatada Yemen. Iyadoo Imaaraadku uu aad u danaynayey in uu caadi ka noqdo dalalka kale ee gobolka sida Turkiga, Iiraan iyo Israa’iil, Sucuudiga oo dareemaya in uu u nugul yahay siyaasadda gudaha, aad ayuu u xishooday oo aan u naxayn maadaama Riyaad uu walaac badan ka qabo xiriirka uu la leeyahay dalalka ay iska soo horjeedaan.
Intaa waxaa dheer, Imaaraatka iyo Sucuudiga siyaasadda gudaha ma aha mid kali ah. Sucuudiga waxa ka jira goobo badan oo awoodeed kuwaas oo abaabuli kara ciidamo bulsho oo ka dhan ah hindisayaasha siyaasadda arrimaha dibadda ee Sucuudiga. Inkastoo dhaxal sugaha uu meesha ka saaray amiirro badan oo ay isku hayeen qoyska talada haya iyo shaqsiyaad badan oo ka soo jeeda qabaa’ilka xoogga badan, haddana waxaa jira dad badan oo mucaarad ku noqon kara oo laga yaabo inay caqabad ku noqdaan awooddiisa. Xataa Imaaraadku maaha mid keli ku ah siyaasadda gudaha. Inkasta oo Abu Dhabi ay tahay jilaaga ugu weyn ee siyaasadda gudaha iyo dibadda labadaba, imaaradaha kale sida Dubai, Sharjah iyo Fujairah waxay u maleynayaan oo u dhaqmaan si ka duwan Abu Dhabi arrimo badan awgeed. Tusaale ahaan, Dubia waa imaaradka ugu horreeya ee maalgashada Turkiga oo ganacsi la sameeya Iiraan.
Gunaanad, tobanaan sano oo iska hor imaadyo iyo hanjabaado dagaal ka dib, wadamada Golaha Iskaashiga Khaliijka (GCC) gaar ahaan Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta, waxay sanadka 2021 wax ka bedeleen siyaasadahooda arrimaha dibedda ee rabitaankooda ah “in ay bog cusub furtaan” oo ay raadiyaan in, haddii aan la xalin, khilaafaadka gobolka iyada oo loo marayo wadahadal iyo gorgortan ay xaaladda kasii dari doonto. Tusaallooyin, laga soo bilaabo heshiiskii Al-Ula ee lagu soo afjaray khilaafkii GCC ee Qadar, labada waddan ee ugu waaweyn GCC waxay balaariyeen wada-hadalladii Iiraan, waxay dejiyeen xiisaddii Turkiga, waxay raaceen xal diblomaasiyadeed oo colaadda Yemen ah, waxayna sare u qaadeen dib u soo celinta Suuriya ee Jaamacadda Carabta.
In kasta oo aanay dhammaan hindisayaashani miro dhalin, dhowr kalena laga yaabo in aanay soo saarin faa’iidooyin la taaban karo wakhti dhow, haddana waxay muujinayaan istaraatiijiyad isbeddelaysa oo wax looga qabanayo caqabadaha gobolka waxayna leeyihiin faa’iidooyin dheeraadka ah oo yarayn kara khilaafka GCC ee siyaasadaha gobolka. War-murtiyeedka laga soo saaray gebagebada Shir-madaxeedka 42-aad ee GCC waxa uu ahaa mid aad u mudnaa isbeddelka ku yimid dhawaaqii iyo nuxurka dooddii hoggaamiyeyaasha ee caqabadaha gobolka iyo sidoo kale xoojinta isku-dubbaridka GCC ee muhiimka ah ee siyaasadda, dhaqaalaha, iyo siyaasadda arimaha bulshada.
Siyaasadda Soomaaliya2 months ago